Simplest Happiness Usoro Ihe Nkiri Azụmahịa - Imewe Mmewe
Usoro Ihe Nkiri Azụmahịa
Usoro Ihe Nkiri Azụmahịa Na zodiac nke China, 2019 bụ afọ nke ezi, yabụ Yen C chepụtara ezì a pịrị apị, ọ bụkwa pun na "ọtụtụ fim dị ọkụ" n'asụsụ Chinese. Ndị ahụ nwere obi ụtọ kwekọrọ n'onyinyo ọwa na nke obi ụtọ ọwa ahụ nwere ike inye ndị na-ege ya ntị. Vidiyo a bu ngwakọta nke ihe fim anọ. Whomụaka na-egwu egwu nwere ike igosipụta obi ụtọ dị ọcha, ma nwee olile anya na ndị na-ege ntị ga-enwe otu mmetụta ahụ na-ele ihe nkiri.
Aha oru ngo : Simplest Happiness, Aha ndị na-emepụta ya : Yen C Chen, Aha onye ahịa : Fox Movies.
Usoro Ihe Nkiri Azụmahịa Yen C Chen Simplest Happiness